Sawirro la isku badalay - BBC Somali
Sawirro la isku badalay
5 Oktoobar 2013
Image caption Kaamirooyinka digitalka ah ayaa la isticmaalaa maalin walba.
Nin ayaa ku doodaya in sawirkiisa marar badan loo isticmaalay in lagu muujiyo warar ku saabsan hoggaamiyaha kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Shuuke Cabdiraxmaan Odawaa oo la sheegay inuu ahaan jiray dagaalyahan ku biiray dowladda Soomaaliya sanadkii 2009-kii waxaa uu warbaahinta qaarkeed u sheegay in sawirkiisa markii ugu horreysay khalad ahaan loogu isticmaalay in lagu barbar dhejiyo khudbad uu jeediyay hoggaamiyaha al-Shabaab Axmed Godane oo Internet-ka laga soo naqilay.
Wixii markaas ka dambeeyay sawirka waxaa khalad ahaan u qaatay warbaahin kale. Ma ahan markii ugu horreysay ee Odawaa uu sheegashadan jeediyo laakiin wararkii hore waxay ku ekaayeen bogagga dadka gaarka ah ay leeyihiin.
Ilaa iyo hadda cabashadiisu waxay u muuqataa inay ku dhacday dhego aan waxba maqleyn. Ilaa heerka in uu Godane sheegto ayaa jahawareerka ka qayb qaadanaysa iyadoo la sheegay in Godane uu yahay ninka soo maleegay weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta dukaammada ee Nairobi, Kenya.
Haatan sawirkaasi adduunka ayuu ku faafay waxaana la rumaysan yahay inuu Godane yahay. " Godane waxaa uu ka faa'iidaystay sawirkeyga si uu adduunka u marin habaabiyo" ayuu sheegay Odawaa.
BBC weli lama hadlin Odawaa laakiin waxay u egtahay inuu hayo wax laga hadli karo. Sawir lagu soo bandhigay website-ka abaalmarinnada dowladda Maraykanku ku bixinayso dadka sharciga la hokeenayo waxaa ku jira sawir kaas aad uga duwan.
Godane oo loo aqoonsan yahay ninka isku xira al-Shabaab iyo al-Qaacida inta badan meel fagaare ah laguma arko, sawirro badanna lagama hayo. Dowladda Maraykanku waxay madaxa Godane saartay toddoba milyan oo dollar.